Yini ongayenzela umhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela uzwile ngokushintsha kwesimo sezulu nokuthi ukwanda kokuxinana kwamagesi afana ne-carbon dioxide noma i-ozone kuphazamisa kanjani ibhalansi yemvelo eyayikhona emkhathini. Kanjalo, Inkinga idalwa ngumuntu, kepha futhi nguyena ongenza lukhulu ukulwa nemiphumela esivele sibhekene nayo.
Kunokungabaza okuningi okuvelayo lapho sithatha isinqumo sokwenza okuthile, okuwukuthi, lapho sifuna ukwenza okusemandleni ethu ukufeza umhlaba ohlanzekile, kepha bonke bazothola impendulo lapha, kule ndatshana enesihloko esithi Yini ongayenzela umhlaba. Ngoba yebo, umuntu oyedwa angenza okuningi. 😉
1.1 Cisha amalambu
1.2 Vala umpompi
1.3 Vula iwindi
1.4 Nciphisa inyama
2.1 Sebenzisa izithuthi zomphakathi
2.2 Tshala isihlahla
2.4 Qoqa udoti (amapulasitiki, ingilazi ...) bese uphinde usebenzise kabusha
Ake siqale ngokubheka ukuthi yini ngamunye wethu angayenza ekhaya, kungaba yindlu, ifulethi, i-chalet, noma yini.
Abanye banokuthambekela kokushiya izibani zikhanya lapho bephuma egumbini, okungakhuphuli kuphela isikweletu sikagesi kepha kukhulisa namandla adingekayo ukukhiqiza. Ngaphezu kwalokho, Yize ugesi ungangcolisi uma siwusebenzisa, wona uma wenzeka.
Ukusinikeza umbono, ngokusho kwe- I-WWF-Spain Electric Observatory i-kilowatt ngayinye icabanga ukuthi ukukhiqizwa kwe-:
178 amagremu esikhutha
0,387 amagremu wesulfure dioxide
0,271 amagremu we-nitrogen oxide
0,00227 cm3 yemfucumfucu enemisebe ephansi naphakathi
0,277mg wemfucumfucu enemisebe ephezulu
Ngalesi sizathu, kunconywa kakhulu ukucisha amalambu futhi usebenzise amandla okonga amandla.
Amanzi ayimpahla eyigugu. Ezindaweni lapho lina kakhulu noma kaningi, kunokuthambekela kokunganakekeli nhlobo ngoba abantu bazi ukuthi bayohlala benakho ... Linda, njalo? Kuzoncika ekutheni izinto zihamba kanjani.
Engingakutshela khona, ngokuphila kaninginingi, yilokho ezindaweni lapho isomiso siyinkinga ukunikezwa kwezinto kuyanqamuka. Lokhu kusho ukuthi kunezinsuku lapho kufanele uphathe khona ukukwazi ukugeza izitsha, izingubo noma ngisho nokugeza. Ngakho-ke, uma ungasebenzisi amanzi, vala umpompi… ngawe, kuwo wonke umuntu.
Sonke siyazi ukuthi kuhle kangakanani lapho kunomoya opholile phakathi nezinyanga ezifudumele zasehlobo. Kepha lapho kungenzeka khona kuzoba ngcono ukuthi kuvulwe iwindi ukuze umoya ovela ngaphandle. Ngale ndlela, ikhaya liyaqabuleka ngokwemvelo.
Umkhakha wemfuyo ungcolisa u-18% ngaphezu komkhakha wezokuthuthaKepha asikwazi ukukhohlwa ukuthi kungenye yezinto ezibhubhisa kakhulu umhlaba. Futhi ngukuthi, ukuze kuhlinzeke umphakathi owanele ngokudla okwanele, kwenziwa amapulazi lapho kwakukhona khona amahlathi, amanzi kanye nomoya kungcolile, futhi kulokho kuyatholakala ukuthi izigidi zezilwane phila uvalelwe ezindaweni ezivalekile
Ngakolunye uhlangothi, ukukhula kwezitshalo akulula nje kuphela, kepha akungcolisi kangako; Futhi uma zivela ekulimeni okuphilayo, azilimazi imvelo.
Uma sesihambile ekhaya singaqhubeka nokunakekela iplanethi uma siguqula amasiko athile:
Sebenzisa izithuthi zomphakathi
Ziyanda izimoto ezihamba emigwaqweni. ESpain kuphela kulinganiselwa ukuthi kunezigidi ezingama-30 ezisakazwayo. Ubuwazi ukuthi lezi zimoto zikhiqiza u-18% we-carbon dioxide emhlabeni? Uma besisebenzisa izinto zokuhamba zomphakathi ngezikhathi ezithile, noma okungenani sabelana ngemoto yethu, besinganciphisa lelo phesenti.
Noma ezimbili, noma ezintathu, noma ... Izihlahla zingamaphaphu amakhulu esinawo emadolobheni amakhulu namakhulu. Ngamacembe awo amunca i-carbon dioxide futhi akhiphe umoya-mpilo ngesikhathi se-photosynthesis, futhi abuye akhiphe amanzi angumoya ngomoya wawo. Konke kusisiza siphefumule umoya ... futhi kuhlanzeke.
Ngakho-ke uma unensimu, ngincoma ukuthi utshale izihlahla ezithile, futhi uma kwenzeka ungenayo, zivolontiye ukuzitshala edolobheni noma edolobheni lakho. Ngiyakutshela ukuthi isipiliyoni sikhathele kepha sinomvuzo omkhulu
Yebo, ongabhemi uyakutshela (kunalokho, umuntu obhemayo), kodwa empeleni intuthu kagwayi ayiqukethe nje kuphela izinto ezingaba ngamashumi ayisikhombisa ezibanga umdlavuza, kodwa eziningi zalezi zinto zingcolisa umoya. Enye indlela yokusiza iplanethi ukungabhemi.
Cabanga ukuthi eSpain kudliwa osikilidi abangaba yizigidi ezingama-89 ngosuku. Lokhu ngonyaka, izihlungi ezingaba yizigidi ezingama-32.455 zikhiphela izinto zazo ezinobuthi emkhathini kungcolisa inhlabathi, izindawo eziluhlaza kanye nomoya esiphefumula sonke.
Qoqa udoti (amapulasitiki, ingilazi ...) bese uphinde usebenzise kabusha
Ngiyazi kahle ukuthi kuwo wonke amadolobha nedolobha kunabasebenzi abazinikele impela ekuhlanzeni imigwaqo, kepha asikwazi ukungakunaki ukuthi kunabantu abaningi abangenandaba nhlobo lapho beshiya khona udoti wabo. Esikhundleni salokho, kubiza ngamunye wethu lutho ukuthatha amakani ukwenza isibonelo awafake emgqonyeni wokusebenzisa kabusha.
Ngokuncane kakhulu singenza okuningi. 😉
Futhi ngalokhu siyaphela. Ubuwazi ukuthi ziningi izinto ezingenziwa ukunakekela uMhlaba?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Yini ongayenzela umhlaba?
Ngifunda zonke izindatshana ozibhalile futhi… Ngiyazithanda !! Kulula ukufunda futhi ungafunda okuningi kusuka ku-.
Singalithuthukisa izinga lethu lempilo neleplanethi yethu, siqale ngezinguquko ezincane, okumele sengeze kuzo kancane kancane ukwesekwa kwabantu njengezikhungo, ezasekhaya nezamazwe omhlaba.
Sethemba ukuthi singashintsha iplanethi ngesikhathi.